Jabuti iyo Rwanda oo kala saxiixday heshiisyo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Jabuti iyo Rwanda oo kala saxiixday heshiisyo
Jabuti iyo Rwanda oo kala saxiixday heshiisyo
Labada dal Jabuti iyo Rwanda ayaa kala saxiiday heshiisyo ka kooban shan qodob, oo ay ka mid yihiin maalgashiga, dhinacyada dibolomaasiyayda, horumarinta Isgaarsiinta iyo in la abuuru guddi wadajir ah oo ka shaqeeya fulinta qodobada lagu heshiyay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuti Mudane Ismaciiil Cumar Gelle oo hadal gaaban ka jeediyay munaasabadaasi ay laba dal ku kala saxiixinayaan heshiisyadaasi ayaa ka hadlay waxtarka heshiisyada noocan ,wuxuuna sheegay in Afrika ay awood u leedahay inay si quman uga faaideystay kheyraadkeeda dihin oo weli si quman looga faaiddeysan.
Dhinaca kale Madaxaweynaha dalka Rwanda Paul Kagame oo isna munasabadaasi ka hadlay ayaa sheegy in labada dal Jabuti iyo Rwanda ay wadaagaan hadaf qura oo ah dhismaha Qaaradda Afrika oo amnigeedu sugan yahay kana fog dagaallo.
Madaxweynaha Rwanda waxa uu uga mahadceliyay Dhigiisa Jabuti sida diiran iyo hab maamuuska sare leh ee loogu soo dhaweeyay Jabuti.
Previous articleIsbahaysiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Mareykanka oo shir laba maalmood ah Minnesota ku qabtay
Next articleDhallinyaro ku xirnaa South Sudan oo Dalka dib loogu soo celiyay